မြန်မာ့ရွေးကောက်ပွဲ, 01 ဇန်နဝါရီ 2016 page 1
1 ဇန်နဝါရီ 2016 သောကြာ
သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံမှု
သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ဒီကနေ့တွေ့ဆုံအချိန် နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲတာဝန်တွေ စနစ်တကျ လွှဲပြောင်းပေးတဲ့ အစဉ်အလာကောင်းတခုထူထောင်ဖို့ ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က ပြောပါတယ်။ ဦးရဲထွဋ်ရဲ့ ပြောဆိုချက်တချို့ကို ကောက်နုတ်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
သမ္မတ၊ တပ်ချုပ်တို့နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံ
သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်တို့နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီကနေ့ နေပြည်တော်မှာ သီးခြားစီ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အသွင်ကူးပြောင်းရေး ကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားပါတီတွေ ရွေးကောက်ပွဲ အရှုံးရင်ဆိုင်မှု ချင်းဒေသခံတွေရင်ဖွင့်
“အပြောင်းအလဲအတွက် ဒီတကြိမ်မှာ သူတို့တွေ NLD ကို မဲပေးခဲ့ကြတယ်။ နောက်တခါ ရွေးကောက်ပွဲကျရင် သူတို့တွေ CNDP ကို ပြန်မဲပေးကြမှာပဲ"
သမ္မတ၊ တပ်ချုပ်တို့နဲ့ ဒေါ်စု တွေ့ဆုံမှုအပေါ် အမြင်တချို့
"အဓိကကတော့ လောလောဆယ် သူပြောနေတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအရ သူ့ကို အခက်အခဲဖြစ်စေတဲ့ သမ္မတမဖြစ်အောင် တားဆီးထားတဲ့ ကိစ္စတွေကိုလည်း ဆွေးနွေးကောင်း ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်"
အရင်စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု ခံခဲ့ရသူတွေ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရတရပ် လက်ထက်မှာ တရားမျှတမှုတွေ ပြန်လည်ရရှိဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါသလား? အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ရှေ့ရှုပြီး ဖြစ်ခဲ့သမျှတွေကို သင်ပုန်းချေတာက မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ရပ်ဖြစ်နိုင်ပါသလား?
ရွေးကောက်ပွဲမှာ လူငယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ပိုပါလာပြီး အောင်မြင်မှုတွေ ရှိတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့်လည်း ပါတီတွေရဲ့ နိုင်ငံရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အပိုင်းမှာ ကိုယ်စားပြုမှု အားနည်းနေသေးတယ်လို့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲအတွင်း ဝေဖန်ထောက်ပြကြပါတယ်။ ကိုထက်အောင်က တင်ပြထားပါတယ်။
သမ္မတ ၊ တပ်ချုပ်တို့နဲ့ ဒေါ်စုတွေ့ဆုံမှု မျှော်လင့်ချက်
သမ္မတနဲ့ဆိုရင်တော့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ဒီ အာဏာ လွှဲပြောင်းရေး တနည်းအားဖြင့် အစိုးရဟောင်းကနေ အစိုးရသစ် လွှဲပြောင်းရေး ကိစ္စကို အဓိကဦးတည်မယ်လို့ ကျနော် မှန်းဆရပါတယ်။
30 နိုဝင်ဘာ၊ 2015
ရွေးကောက်ခံ အမတ်များအတွက် သူရဦးတင်ဦးအမှာစကား
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ အောင်နိုင်သူတွေရဲ့ အမှားမာန်ကို ဆင်ခြင်တုံ တရားနဲ့ ထိန်းသိမ်းဖို့ပြောဆိုရင်း ပါတီတွင်း၊ စည်းကမ်းထိမ်းသိမ်းရေးကို အဓိက လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ သူရဦးတင်ဦးက ပြောပါတယ်။ သူရဦးတင်ဦးရဲ့ ပြောကြားချက်တွေထဲက တချို့ကို ကောက်နုတ် တင်ပြထားပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ၊ ရှမ်းပြည်နယ်တွင်းပဋိပက္ခနဲ့ SNLD အမြင်
ရှမ်းပြည်နယ်တွင်း တချို့ဒေသတွေမှာ ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီိမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ သေချာပေါက်နိုင်မယ့် ဒေသတွေကို လက်လွှတ်ခဲ့ရတယ်လို့ SNLD အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး စိုင်းညွန့်လွင်က VOA ကို ပြောပါတယ်။ ဒေါ်ခင်စိုးဝင်းက တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။